Vakawanda Vobatwa neTyphoid kuMashonaland West
Vanhu vanosvika zana nevanomwe vekuChidamoyo kuHurungwe mudunhu reMashonaland West vari kufungidzirwa kuti vane chirwere cheTyphoid.
Mukuru webazi rezvehutano mudunhu reMashonaland West, Dr Wensilus Nyamayaro, vabvuma kuti chirwere cheTyphoid chave mudunhu reChidamoyo.
VaNyamayaro vanoti vanhu vakawanda vari kufungidzirwa kuti vane chirwere cheTyphoid vanogara mumisha miviri yeManyembere neMunhuwa, iyo iri kunwa mvura yemurwizi zvichitevera kusashanda kwezvibhorani munzvimbo idzi.
VaNyamayaro vanoti pari zvino ongororo yavaita kune vamwe vevanhu ava zvinoratidza kuti vaviri vakaonekwa kuti vane chirwere cheTyphoid.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufungidzirwa kuti vakabata chirwere ichi, VaNyamayaro vanoti vaendesa nhengo dzavo dzedunhu diki reHurungwe nedunhu guru reChinhoyi kuti vanodzivirira kupararira kwechirwere cheTyphoid.
Zvinonzi kune vanhu vashoma vari kufungidzirwa kuti vane chirwere cheTyphoid mumisha inoti Svenhiwa, Kaonza, Chatyavazungu neTeedza kuHurungwe.
Bazi rezvehutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vari kufungidzirwa kuti vangangove nechirwere cheTyphoid munyika asi vanoti chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika vapfumbamwe gore rino munyika.